Juan Manuel Santos oo abaalmarinta nobeelka la siiyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Madaxweynaha dalka olombias Juan Manuel Santos. sawir: Fernando Vergara/AP/TT
Juan Manuel Santos oo abaalmarinta nobeelka la siiyay
Guddiga Nobel: madaxweyne Santos waxuu muujiyey geesinimo
La daabacay fredag 7 oktober 2016 kl 05.27
Guddiga nobeelka ee dalka Noorway ayaa maanta ku dhawaaqay in billadda nobeelka ee nabadda lagu abaal-mariyo madaxweynaha dalka Kolombiya Juan Manuel Santos.
Guddigaayaa tallaabadan ku micneeyay ciseyn lagu ciseynayo madaxweyne Santosisku-deygiisa la xiriira soo af-jaridda dagaalkii sokeeye ee muddo 50 sannadoodgaarsiisan ka taagnaa dalka Kolombiya.
Dhawaanayaa afti laga qaadey shacabweynaha dalka Kolombiya oo la xiriirta in ayaqbalaan iyo in kale heshiis nabadeed oo madaxweyne Santos la galay jabhaddahubeysen ee lagu magacaabo FARS. Hase yeeshee ay guushii ku raacday qolooyinkii ka soo horjeeday in la meelmariyoheshiiskii dawladdu la gashay jabhadda FARS.
Madaxweyne Sontas keligiis ayaa la shaaciyey in la siinayo billadda Nobel ee nabadda inkastoo uu jiro garabka jamhadda FARS oo ayaguna gacan ku lahaayeen heshiis nabaddeed ee dowladda Kolombia iyo jamhaddu dhawaan kalo saxiideen.
Weriyaha idaacadda Ekot ugu faallooda arrimaha dibadda Agneta Ramberg oo ka faallooneysey sababta keligiis billaddan loo siiyey madaxweyne Santos ayaa ku micneysey in guddiga nobeelka aadmoodid in ay ka dhowrsanayaan in la dhaleeceeyo madaame taariikhada Jamhadda FARS ay tahay mid madow oo aan la difaaci karin.
Wasiirka arrimaha dibadda Margot Wallström ayaa soo dhaweysey in madaxweynaha Kolombia la siiyo billadda nabadda.
- Waa arrin aad loogu farxo. Waxuu muujiyey hoggaamin wanaagsan. Heshiis nabadda ee laba garab waa noociisa horey loo arag, waayo waa heshiis ugu horeeyey caalamka oo ku dheehantahay sinaan, ayey tiri wasiirka arrimaha dibadda Margot Wallström.
Laakiin labaddii garab ee heshiiskan nabadeed ku lug lahaa in garab keliya la abaal-mariyey wasiiradda way ka gaabsatay, waxay tiri waxaan u deynayaa ka hadalka middas guddiga nobeelka, iyadoo intaas raacisey oraahda ah "it takes two to tango".
Taariikh kooban oo ku saabsan abaalmarinta Nobelpris
Saddex caalin oo ku guuleysatay billadda nobel ee kimistariga
Abaalmarinta Nobel qaybteeda kimistariga oo lagu dhawaaqay